Knowledge Archives - MYANMORE+
Knowledge Wai Lin - January 26, 2021 0
တစ်ကျောင်းတစ်ဂါထာ တစ်ရွာတစ်ပုဒ်ဆန်း ဆိုသလို နိုင်ငံတစ်ခုရဲ့ ယဉ်ကျေးမှု၊ ဓလေ့ထုံးစံဟာ တိုင်းတပါးသားတွေအတွက် အထူးအဆန်း ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ တစ်နိုင်ငံတည်းမှာကို နေရာဒေသပေါ်မူတည်ပြီး ကွဲပြားတဲ့ ဓလေ့ထုံးစံတွေ ရှိတတ်ပါသေးတယ်။ ကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေအတွက် တခြားနိုင်ငံတွေရဲ့ ယဉ်ကျေးမှု ဓလေ့ထုံးစံအချို့ဟာလည်း အံ့ဩစရာတွေ ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ ဒါက သဘာဝပါပဲ။ ဒီနေ့မှာတော့ နိုင်ငံခြားသားတွေအတွက် ထူးဆန်းနေတဲ့ မြန်မာပြည်ရဲ့ အကြောင်းအရာ တချို့ကို...
Knowledge Wai Lin - January 14, 2021 0
Knowledge Wai Lin - January 10, 2021 0
ဗီတာမင်စီဓါတ် ကြွယ်ဝစွာပါဝင်​နေတဲ့ လိ​မ္မော်သီးဟာ ရှောက်သံပုရာနွယ်ဝင် အသီးအနှံတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာပြည်မှာ ပျားလိ​​မ္မော်၊ ရွှေလိ​မ္မော်နဲ့ ရိုးရိုးလိ​မ္မော်တို့ကို အများဆုံးစားသုံးကြပါတယ်။ ရိုးရိုးလိ​မ္မော်က လိ​မ္မော်မျိုးရင်း အစစ်မဟုတ်​ပါ။ ပျားလိ​မ္မော်နဲ့ ရှောက်ခါးသီးကို မျိုးစပ်ထားခြင်းသာ ဖြစ်ပါတယ်။ လိ​မ္မော်သီး အများဆုံးစိုက်ပျိုးတဲ့ ဒေသဟာ ဘရာဇီးဖြစ်​နေ​ပေမယ့် နဂိုမူလထွက်ရှိရာ ဒေသက​တော့ တရုတ်၊ အိန္ဒိယ နဲ့ မြန်မာပြည်တို့ရှိရာ...
Knowledge Nay Thiha - January 8, 2021 0
Knowledge Wai Lin - December 25, 2020 0
Knowledge myanmoreplus - December 20, 2020 0
ရေခဲသေတ္တာထဲမှာမြွေရှိတယ်လို့ဇနီးဖြစ်သူကပြောတော့ Steve Wilson အနေနဲ့စိုးရိမ်စိတ်မဖြစ်မိပါဘူး။ သူနဲ့သူ့သူငယ်ချင်းတွေဟာရေခဲသေတ္တာထဲရောက်နေတဲ့မြွေအကြောင်းသိပ်သိချင်နေကြတယ်လေလို့ Wilson ရဲ့ဇနီး Julie Foote ကပြောပါတယ်။ ရေခဲသေတ္တာထဲထည့်သိမ်းထားတဲ့မြွေအသေကောင်လေးကို သူတို့က Mud လို့နာမည်ပေးထားပါတယ်။ Mud ဟာရွှံလူးမြွေလေးဖြစ်ပြီးရှားပါးတဲ့မြွေအမျိုးအစားဖြစ်တာကြောင့်သူ့အလောင်းကိုအအေးခံပြီး အမေရိကကပညာရှင်တွေဆီပေးပို့စမ်းသပ်ဖို့စီစဉ်နေပါတယ်။ Mud ဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်ကမြောက်ဒဂုံမှာရှိတဲ့ခွေးမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ ကိုနေဇွဲရဲ့ခြံထဲရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ Mud ရောက်နေတာကိုအရင်ဆုံးသတိထားမိခဲ့သူကတော့ ကိုနေဇွဲမွေးထားတဲ့ခွေးတွေပါ။ ခွေးဟောင်သံကြားလို့ထွက်ကြည့်တဲ့အခါမှာ Mud ကိုတွေ့ရတာပဲ။ တမြန်နေ့ကပဲခြံထဲကိုမြွေဟောက်ကြီးတကောင်ရောက်လာသေးတာမို့ ကိုနေဇွဲဟာဒီအတွေ့အကြုံနဲ့သိပ်တော့မစိမ်းလှဘူး။ ၆...
Knowledge Wai Lin - December 7, 2020 0
(အမျိုးသားနေ့ နှစ် ၁၀၀ ပြည့် အထိမ်းအမှတ်) နှစ်စဥ်အလေးအမြတ်ထား ကျင်းပလာတဲ့ အမျိုးသားနေ့ဟာ ဒီနှစ်ဆိုရင် နှစ် ၁၀၀ ပြည့်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ အမျိုးသားနေ့ နှစ် ၁၀၀ ပြည့်နဲ့ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် နှစ် ၁၀၀ ပြည့်အခမ်းအနားတွေ တိုက်ဆိုင်နေတာ ထူးခြားလှပါတယ်။ ၁၉၂၀ ပြည့်နှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၅ ရက် (မြန်မာသက္ကရာဇ်...
Knowledge Wai Lin - November 22, 2020 0
လူသားတိုင်း တောင့်တနေတဲ့ ကိုဗစ်ကာကွယ် ဆေးရဖို့ လက်တစ်ကမ်း အလိုရောက်နေပါပြီ။ ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးရဖို့ ကြိုးစားလာတာ ခုဆိုရင် တစ်နှစ်နီးပါးရှိပါတယ်။ ဆေးကုမ္ပဏီတွေကလည်း အပြိုင်အဆိုင်ထုတ်လုပ်နေလို့ ၉၅ ရာခိုင်နှုန်းအထိ အောင်မြင်တဲ့ဆေးတွေရှိလာပါတယ်။ မကြာခင်ရရှိမယ့် ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး သိသင့်သိထိုက်တာတွေကို တင်ပြလိုက်ပါတယ်။ ဆေးကုမ္ပဏီတွေ၊ ဆေးသုတေသနလုပ်ငန်းတွေ အားလုံး ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးရဖို့ ကြိုးစားနေတာ ခုဆိုရင် နောက်ဆုံးအဆင့် Phase III...
ဂျပန်တွေ ဘာကြောင့် ဉာဏ်ကောင်းတာလဲ
Knowledge Wai Lin - November 19, 2020 0
လူကြီးတွေ ငယ်ငယ်တုန်းက ပြောဖူးတယ်..။ ဂျပန်တွေ ဉာဏ်ကောင်းတာ ပင်လယ်ငါးစားလို့တဲ့..အတိအကျမသိသေးတဲ့ အရွယ်ဆိုတော့ လက်ခံရတာပေါ့။ တီထွင်မှုအများစုလုပ်သူတွေက ဂျပန်နိုင်ငံသားတွေ ဖြစ်နေတော့ လေးစား အားကျတာပေါ့။ တကယ်တန်းလေ့လာကြည့်တဲ့အခါ ဂျပန်တွေ မွေးကတည်းက ဉာဏ်ကောင်းခဲ့တာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဉာဏ်ကောင်းအောင် လေ့ကျင့်ယူခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အပြီး ပြာပုံအတိဖြစ်နေတဲ့ နိုင်ငံကို နှစ်အနည်းငယ်အတွင်း ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်းနိုင်ငံ ပြန်ဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တာ နည်းတဲ့စွမ်းရည်မဟုတ်ပါဘူး။ ဂျပန်တွေက...
Knowledge Wai Lin - November 11, 2020 0